Nagu saabsan - Yuyao Warshad Qalabka Dab-demiska Adduunka
Warshadda Qalabka Dabka Dunida Yuyaowaa naqshad xirfadle ah, soo saaraha horumarinta iyo dhoofinta naxaasta iyo walxaha naxaasta ah, flange, qaybo balaastig ah oo qalabka balaastigga ah iwm. Waxaan ku sugan nahay Degmada Yuyao ee Zhejiang, Abuts oo ka soo horjeedda Shanghai, Hangzhou, Ningbo, waxaa jira hareeraysan oo qurux badan iyo gaadiid ku habboon.
Waxaan soo bandhigi karnaa qalabka wax lagu bakhtiiyo, biyo-shublaha, biiyaha lagu buufiyo, isku-xidhka, fure -yaasha, qalabka wax lagu hubiyo iyo qalabka kubbadda lagu xidho. Waxaan soo saareynaa dhammaan badeecadahan, si adag ula jaan qaada heerarka API, JIS iyo BS. Dhammaan alaabooyinkeennu waxay u hoggaansamaan heerarka tayada caalamiga ah waxaana si weyn looga mahadceliyaa suuqyo kala duwan oo adduunka ah. Warshaddeenu waxay daboolaysaa aag 8000 mitir oo spuare ah, waxaan hadda haysannaa in kabadan 35 shaqaale iyo farsamo yaqaanno ah. Xarumaheena sifiican wax looga bartay iyo xakamaynta tayada wanaagsan ee dhamaan heerarka wax soosaarka ayaa awood noo siinaya inaan damaanad qaadno wadarta qanacsanaanta macaamiisha. Natiijo ahaan alaabteenna tayada sare leh iyo adeegga macaamiisha ee aadka u sarreeya, waxaan helnay shabakad iib ah oo caalami ah oo gaareysa Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika, Aasiya, Bariga Dhexe, Yurub.
Shirkaddayadu had iyo jeer waxay ku jirtaa iimaan: daacadnimadu waa aasaaska ganacsiga, daacadnimaduna waa ku yar tahay u adeegida, macaamiisha waxay u qaadataa inay diirada saarto, tayada nolosha. Haddii aad xiiseyneyso mid ka mid ah alaabtayada, fadlan nala soo xiriir. Waxaan rajeyneynaa inaan sameysano xiriir ganacsi oo guuleysta macaamiisha cusub ee adduunka mustaqbalka dhow.